अलग भए जोन सिना र निक्की बेला ? | Emedia Hub UK
Home Entertainment Bollywood अलग भए जोन सिना र निक्की बेला ?
न्युयोर्क – डब्लुडब्लुई स्टार जोन सिना र निक्की बेलाले आफूहरु अलग भएको घोषणा गरेका छन् । ‘यो निर्णय निकै कठिन थियो । एकअर्काप्रति हाम्रो माया र सम्मान कायम रहनेछ,’ निक्की बेलाले ट्वीटरमा वक्तव्य जारी गर्दै लेखेकी छन् । दुवै जनाले गत अप्रिल २०१७ मा इन्गेजमेन्ट गरेका थिए भने आगामी ५ मे मा विवाह बन्धनमा बाँधिदै थिए ।
दुवै जना केही दिनअघि मात्र सँगै देखिएका थिए । यसले डब्लुडब्लुईका फ्यानहरु आश्चर्यचकित बनेका छन् । जोन सिनाले हलिउडमा पनि राम्रो करियर बनाएका छन् । उनको नयाँ चलचित्र बलकर्स आउँदैछ ।
यता, जोन सिनाले आफ्ना इन्सटाग्राममा ‘अहिलेसम्मकै खराब दिन’ भनेर लेखेका छन् । रेस्लिङ फ्यानहरुले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु जनाइरहेका छन् । – एजेन्सी